News | rape
News | Tag: rape
तिहाड जेलमा निर्भया बलात्कारका दोषीहरुले कति गरे कमाई ?
एजेन्सी । तिहाड जेलका अधिकारीहरूले निर्भया सामूहिक बलात्कारका चार जना दोषीलाई आफ्नो परिवारलाई अन्तिम पटक भेट्ने चाहनाबारे सोधेको बताइएको । उनीहरूलाई झुण्ड्याउनुभन्दा पुर्व परिवारसँग भेट्न चाहना भए आग्रह गर्न भनिएको छ ।
बलात्कार अभियोग लागेपछि प्रहरी नायब निरीक्षक पक्राउ
बाँके । बलात्कार अभियोग लागेपछि बाँकेमा कार्यरत एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक पक्राउ परेका छन्।
७० वर्षीय हङ्कुर योगीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा सात वर्ष ६ महिना कैद सजाय
सिद्धलेक । सिद्धलेक गाउँपालिका–२ की मानसिकरूपमा कमजोर एक २७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत धादिङले एक जनालाई सात वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
बलात्कारको आरोपमा इञ्जिनीयर चन्द पक्राउ
सप्तरी । सप्तरीको राजविराज बजारमा एक १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । घर फर्किरहेका बेला बिहीबार राति ७ बजे बजारबाटै अपरहण गरी दुई युवाले बलात्कार गरेको ती बालिकाले बताइन् ।
ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका एक वडा सचिवविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका–७ का वडा सचिव ४५
यस्तो पनि बुबा ! जसले दुई छोरीलाई विगत १५ वर्षदेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आए
काठमाडौं । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि अर्को आश्चर्यजनक घटना बाहिरिएको छ, जहाँ आफ्नै बुबालाई दुई छोरीलाई विगत १५ वर्षदेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएका छन् । यो घटना हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनाऊको हो ।
काठमाडौँ । मुलुकभर जबर्जस्ती करणीका घटना बढेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा आव २०७५÷७६ मा जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा वृद्धि भएको हो ।